indawo yokuqeshisa enefenitshala yabantu abayi-2 - I-Airbnb
indawo yokuqeshisa enefenitshala yabantu abayi-2
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMarie Paule
Libala uxinzelelo, thatha ixesha lokuphila, uphinde ufumane umzimba wakho, indalo ziinjongo ezilula zeholide yakho noMarie-Paule noFrançois abaza kukuvuyela ukukwamkela kwindlu yabo enefenitshala eyi-40 m2;
Indlu yethu iseThiézac (900 m ngaphezu kolwandle), 12 mm ukusuka kwindawo yokutyibiliza kwikhephu yaseLioran ngeRN122, ilali ethe cwaka embindini weAuvergne Volcano Park. Iindawo ezintle ezikufutshane, yonke imidlalo ejikelezwe yindalo kuwo onke amaxesha onyaka. Iingxangxasi, iiBurons, Iinqaba
kwindlu yabo eyi-40 m2 enefenitshala yabantu abayi-2, inegumbi lokulala eliyi-1, ikhitshi eliyi-1, igumbi leshawa eliyi-1, igumbi lokutyibiliza kwikhephu eliyi-1 kunye negadi encinci.
Indlu yethu enento yonke : umatshini wokuhlamba impahla, ioveni, i-microwave, i-TV
4.66 · Izimvo eziyi-55
Umbuki zindwendwe ngu- Marie Paule
Siqhubeka ngendlela esabela ngayo, kusuku olungaphambi kwalo nosuku lokuhamba ...
nantsi inomboloyam yefowuni 0611777wagen yokuqesha .
Siqhakamshelana nomnye nge-imeyile okanye ngefowuni, ukuze uchaze ixesha lokufika kunye nokukwazi ukufikelela ukuba besingekho, nto leyo enqabileyo...
Siqhakamshelana nomnye nge-imeyile…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Thiézac